Teknika sary tamin'ny lasa izay azo averina amin'izao fotoana izao | Famoronana an-tserasera
La mpaka sary Joni Sternbach Fantatra amin'ny sarintanin'ireo mpaka sary onjam-peo mampiasa teknika tamin'ny taonjato faha-XNUMX izy.
Nampiasa sarimihetsika endrika lehibe sy ny sasany amin'ireo loharanom-pahalalana lehibe indrindra hanamboarana sary izy Sarintany sy sary ankehitriny, toy ny fizotran'ny takelaka lena, amin'ity fomba ity, dia afaka mandray sary ankehitriny izay manana rivotra somary taloha.
Na eo aza izany, Joni Sternbach Tsy izy irery no liana amin'ny teknika taloha sary, satria tsy maintsy miresaka momba an'i Adam Fuss, mpaka sary matihanina iray hafa koa isika. Amin'ity tranga ity dia manandrana ny fizotran'ny sary mahazatra sy amin'ny fotoana sasany dia afaka manala ny fampiasana ny fakantsary.
Amin'izany fomba izany dia tsy mitovy ny asan'izy ireo noho ny fandikana ankehitriny amin'ireo teknikan'ny sary voalohany ireo, anisan'izany ny fomba izay tsy mila fakan-tsary sy ilay mbola. Etsy ankilany, matihanina iray hafa izay misafidy ny hampihatra teknika fakana sary tamin'ny lasa azo averina amin'izao fotoana izao dia ny mpaka sary Richard Learoyd, inona no nofidinao hatao sary miloko mampiasa ny iray amin'ireo loharanom-pahalalana tranainy indrindra fantatra amin'ny hoe camera obscura.
Roa hafa hanatevin-daharana ireo lehibe mpamorona dia i Walter sy i Zoniel, izay afaka namadika ilay Somerset House toerana amin'ny obscura fakan-tsary lehibe. Zava-dehibe ny manamarika fa na dia iray amin'ireo teknika voalohany amin'ny saryIzy io koa dia iray amin'ireo be mpampiasa indrindra ankehitriny.
Ity dia teknika tanterahina amin'ny famoronana efitrano mitovy habe amin'ny efitrano na efi-trano maizina, io no toerana anaovan'ny, ohatra, an'i Learoyd kopia miabo tsara amin'ny alàlan'ny fampisehoana ireo takelaka taratasy lehibe hamoaka jiro mivantana. Araka izany, ny ravina tsirairay dia zahana tsirairay mamorona sary tsy misy voa tanteraka.
Eo amin'ny sehatry ny fakana sary dia misy mpanakanto nisafidy ny safidy teknika fakana sary tamin'ny lasa izay azo averina amin'izao fotoana izao hahafahany manao ny asany. Ohatra iray amin'izany i Christian Marclay, izay manangana fakantsary fakantsary lehibe anao ary izy indray miasa miaraka amin'ny taratasy sary gelatin volafotsy.
Alison Rossiter dia mpanakanto iray hafa ihany koa izay miasa miaraka amin'ny sary tsy mampiasa fakan-tsary, nanomboka teo taratasy fakana sary tsy ampiasaina amin'ny alàlan'ny fampiasana iraisan'ny mpamorona ranoka mivantana amin'ny habakabaka na koa amin'ny alàlan'ny fanitrihana ireo takelaka ao amin'ny mpamorona, izay nahatonga ny sary tsy hitranga.
Ny tintype dia noforonina tamin'ny taona 1800 ary anisan'ireo teknika fakana sary fa afaka nanao izay hahafahan'ny saika ny tsirairay hanana fotoana hanaovana ny sariny izy ireo. Ny tintypes voalohany dia namboarina tamin'ny metaly, noho izany dia mora sy afaka izy io ahafahan'ny mpaka sary afaka manolotra sary eny an-dalana.
Tsy zavatra mahafinaritra intsony ny fakàna sary, satria amin'izao fotoana izao ny telefaona finday dia misy fakantsary tafiditra ao amin'ny asany. Na eo aza izany, na eo aza ny fandrosoana nitranga tao amin'ny teknika nomerikaMbola misy ny olona mbola liana amin'ny fizotran'ny sary.
Ny teknika izay nampiasaina ary mbola ampiasaina dia ilay manondro ny kopian'ny ratsy ary ny teknolojia ankehitriny ve dia ahafahana mamorona negatives tsy mampiasa efitrano maizina.
Alohan'ny ahafahanao manao ireo teknika taloha ilaina ny sary tsara, avy eo manome izany fikitika manokana an'ireo sary izany. Raha misy olona te hampihatra azy ireo, misy solomaso manokana izay azo ampifanarahana amin'ny telefaona finday.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Teknika sary tamin'ny lasa izay azo averina ampiasaina ankehitriny